> Resource> iPhone> Olee wepụ Photos si iPhone na nkwado ndabere na Wondows / Mac OS X
Ewepụta photos site na iTunes ndabere
O di nwute na m iPhone agbajikwa. Ekele m na synced ya iTunes na nso nso, n'ihi ya, m nwere ihe iTunes ndabere nke ya niile data na kọmputa m. Olee otú m ele ma ọ bụ weghachite foto site na m iPhone ndabere? M na-adịghị ọzọ iPhone, iPad ma ọ bụ iPod nke nwere ike ele photos. M na-enyocha m iCloud akaụntụ na ọ dịghị nwere ihe ọ bụla photos. Ekele dịrị bụla na-aza!
N'agbanyeghị ihe mere ọ bụ, Apple adịghị ekwe ka onye ọ bụla ele iTunes ndabere ọdịnaya, ma ị na weghachi ya kpam kpam gị Apple ngwaọrụ. Iji mezuo nke a, ị chọrọ iji nweta a na-atọ akụkụ ngwá ọrụ na-enyere wepụ nkwado ndabere na mpaghara mbụ, dị ka Wondershare Dr.Fone maka iOS (iPhone Data Recovery) ma ọ bụ Wondershare Dr.Fone maka iOS (Mac iPhone Data Recovery). Ọ na-ahapụ gị ka ị na wepụ dum iPhone ndabere maka nhọrọ preview na mgbake. Nke ahụ bụ na-ekwu, i nwere ike flexibly wepụ foto site na iphone na nkwado ndabere na Windows ma ọ bụ Mac OS. Ọ na-ewe gị atọ nzọụkwụ. Ka ego ya ọnụ.
Nzọụkwụ 1. Download iPhone ndabere extractor software
The ikpe mbipute-enye gị ohere wepụ na ịhụchalụ niile data na iPhone ndabere maka free. Dị nnọọ ibudata ya na nwere agbalị site onwe gị.
Nzọụkwụ 2. Run usoro ihe omume wepụ foto site na iPhone ndabere
Ebe a, ka na-na Windows version dị ka ihe atụ. Mac ọrụ nwekwara ike na-eso nzọụkwụ n'okpuru. Ha na-na yiri.
Mgbe wụnye usoro ihe omume na kọmputa gị, na-agba ya na-aga nhọrọ nke naputa site na iTunes ndabere File. Mgbe ahụ omume nwere ike na-akpaghị aka na-achọpụta rụọ niile iPhone ndabere faịlụ ẹdude na kọmputa gị na ga-egosipụta na ha n'ihu gị dị ka a ndepụta.
Ọzọ, ihe ị chọrọ ime bụ na-ahọrọ ndabere gị iPhone. Ọ bụrụ na e nwere ihe karịrị otu, ị nwere ike họrọ onye na a na-adịbeghị anya ụbọchị mbụ. Wee pịa na Malite iṅomi button iji nweta ya amịpụtara.
Nzọụkwụ 3. Preview photos na iPhone nkwado ndabere na mpaghara naghachi ha
The adịrị usoro ga-eri gị banyere 10 sekọnd na kasị. Ozugbo ọ na-akwụsị, ị ga-enweta a Doppler n'ihi na niile data na nkwado ndabere na mpaghara n'ụzọ zuru ezu, ma ị nwere ike ihuchalu onye ọ bụla ihe na ya otu otu. N'ihi na photos, ị nwere ike họrọ Igwefoto Roll na Photo Stream. Tinye akà rà ihe ọ bụla ị chọrọ ịnọgide na-na pịa na Naghachi button na-azọpụta ha na kọmputa gị na otu Pịa.
Ọ bụrụ na ị na-eji a Mac version, nzọụkwụ bụ oké yiri. I nwekwara ike ime ya dị ka nzọụkwụ n'elu mgbe nile. Ntak-agbalị ya ugbu a?
Ihe niile ị na Mkpa Ịmata tupu ịzụrụ a eji iPhone